Ari Pamhepo Software Marekodhi Shamwari YePuratifomu kana Anokwikwidza? | Martech Zone
China, Gumiguru 26, 2017 China, Gumiguru 26, 2017 Douglas Karr
Shamwari yangu yakandikumbira kuti ndiongorore chikuva chavo pane yechitatu-bato dhairekitori saiti svondo rino, ichiti iyo saiti inotyaira yakati wandei traffic kune vamwe vatengesi muindastiri. Ndakaongorora nekukurumidza dhairekitori resaiti uye ichokwadi, ivo vakawana mamwe masiteki akasimba muindastiri yeshamwari yangu. Zvinotaridza zvine musoro chete kuti vanofanirwa kukumbira kuongororwa kuti vawane kuonekera mune dhairekitori.
Dhairekitori haisi diki saiti, yakakura kwazvo. Iyo ine yakanakisa yekutsvaga injini masosi, mushambadzi mushandi, vezvenhau kushambadzira kubatanidzwa, uye kunyangwe yakabhadharwa yekushambadzira bhajeti. Nekuti traffic yayo inorema uye inogona kutyaira vazhinji vanoenderana vanoona kumapuratifomu, zvakare ine yemukati yakabhadharwa kushambadzira sisitimu uko shamwari yangu inogona kutenga yakatanhamara mbiri kana kuratidza kushambadza pamapeji akakodzera.
Ndeupi rwendo rwekutarisira?
Dhairekitori racho rinowanikwa mumainjini ekutsvaga akakosha epamhepo.
Mushandisi wekutsvaga anotsvaga padhairekitori kwavanowana chikuva chako padyo nemakwikwi ako ese.
Vashoma vashandisi vekutsvaga vanodzvanya-kuenda kukambani yako. Mazhinji akarasika kune vako vanokwikwidza, kunyanya kana vaine hombe kushambadzira bhajeti mukati me dhairekitori.
Pano pane dambudziko nerwendo urwu ... haisi shamwari yepuratifomu, ndivo vakwikwidzi vavo. Ipuratifomu iri kumisa nemaune tarisiro yako, uchivachinjisa kune yavo saiti, kuitira kuti vateereri vaite mari ipapo. Iwe unosimudzira dhairekitori kune vashandisi vako kuti vaise wongororo - izvo zvavanoita - izvo zvinovandudza kutsvagisa chinzvimbo chedhairekitori. Panguva iyoyo, inozvifambisa pachezvayo pakati pako netarisiro yako. Iwe ikozvino watamira kudhairekitori kuti upe bhizinesi rako
Ndeipi imwe nzira?
Iwe unovaka yakasimba online kuvepo, chinzvimbo chiri nani pane dhairekitori.
Tarisiro inofuratira dhairekitori uye enda wakananga kune zvako zvemukati, hauna kumboburitsa makwikwi.
Zvemukati zvakakosha, zvinomanikidza zvinokwezva mushanyi kuti ave mutungamiri, tungamira kumutengi.
Dhairekitori iro harina mukana uri nani wekukurova iwe muinjini dzekutsvaga kupfuura zvaunoita iwe, nei uchivabatsira? Sei uchivabhadhara, kutsigira yavo saiti, uye panguva ino, ivo vari kubatsira vako vakwikwidzi? Zvingaite semumwe munhu akamira pamberi pechitoro chako, achitarisa tarisiro yakatenderedza chivharo kune vakwikwidzi vako, uyezve achikukumbira kuti uvabhadhare kuitira kuti uve nechokwadi chekuti vadzosa kuchitoro chako. Unogona kuvabvisa pasuo rako, handiti?
Iwe unofanirwa kutarisa kune chero zviwanikwa zviwanikwa sese shamwari mukwikwidzi. Ehezve, ivo vanogona kuve nemukana wekutyaira zvisingaite traffic kwauri. Asi zviri pamutengo wako. Unofanirwa kuona kuti wakaringana here kana kwete nekuvimbika uye uchida kuenderera uchibhadhara kubhadhara zvavo vateereri.
Handidi. Uye ini handina kunyora ongororo yepuratifomu yeshamwari yangu.
Tags: Directoriesonline app madhairekitorionline saas dhairekitorichikuva madhairekitorisoftware madhairekitori